Search လိုကားသီသန္ - BajarFB.com
Search Results - လိုကားသီသန္
Viber no 09977784480 လကားသီသန့် လက်လီမရောင်း 👉ဘဝမှာ မလွဲသာလို့ ခြေတလှမ်း နောက်ဆုတ်ခဲ့ရင် အရှိန်ယူတဲ့ ခြေတလှမ်း ဖြစ်ပါစေ အရူံးပေးတဲ့ ခြေတလှမ်း မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ ချစ်ရသော Customerများအတွက် စကားလက်ဆောင် ပေးလိုက်ပါတယ်☺️ Mill Brand Fast Charger 66W ဖုန်းအားအဝင်ကြာလို့ စိတ်ညစ်နေသလား ??? 🔌 ဒီလိုအခက်အခဲ စိတ်ညစ်မှုတွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ့် 66W ပါတဲ့ Mill Brand T66 , T68 Fast Charger လေးရှိနေပြီလေ 🔌 Andriod၊ Type C၊ ကြိုက်တာသုံး အားလုံးအဆင်ပြေပြီး အားအဝင်မြန်စေပါတယ် 🔌အားသွင်းကြိုးရော ခေါင်းပါ အားအဝင်လျှင်မြန်စေပြီး 66Wတောင် အပြည့်ထွက်တော့ ကြိုက်ပြီပေါ့ 🔌Over Temperature, Over Power, Over Voltage နဲ့ Over Current ဖြစ်ခြင်းမှလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ် 🔌 1minute ကို 5%တောင်တက်ပါတယ်☺️ မတက်ခဲရင် ပစည်းတန်ဖိုးအတိုင်း ပြန်လျှော်ပေးမည်။ စက်ရုံမှတိုက်ရိုက်တင်သွင်းသောကုန်ပစည်များဖြစ်သောကြောင့် ပစည်းမှန်/စျေးမှန်ဖြစ်ကြောင်း စိတ်ချယုံကြည်စွာ ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါသည် 👉တောင်ပံချင်းခတ် လက်ချင်းယှဥ်လို့ 👉ခြွင်းချက်မရှိ ပေါင်းစည်းထုဆစ် 👉တည်ဆောက်နေကြတဲ့😊😊 👉Ko Wai Tun Mobileမှာယှဥ်ပြိုင်မူမျိုးစုံကို အန်တုကာ တည်ရှိနေသောနေရာလေးကတော့NoJ7 J8 J9 ပထမထပ် ယုဇနပလာဇာ မဂ်လာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်းမှာ တည်ရှိနေပါတယ်😊
Viber no 09977784480 လကားသီသန့် လက်လီမရောင်း 👉ဘဝမှာ မလွဲသာလို့ ခြေတလှမ်း နောက်ဆုတ်ခဲ့ရင် အရှိန်ယူတဲ့ ခြေတလှမ်း ဖြစ်ပါစေ အရူံးပေးတဲ့ ခြေတလှမ်း မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ ချစ်ရသော Customerများအတွက် စကားလက်ဆောင် ပေးလိုက်ပါတယ်☺️ Mill Brand Fast Charger 66W ဖုန်းအားအဝင်ကြာလို့ စိတ်ညစ်နေသလား ??? 🔌 ဒီလိုအခက်အခဲ စိတ်ညစ်မှုတွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ့် 66W ပါတဲ့ Mill Brand T66 , T68 Fast Charger လေးရှိနေပြီလေ 🔌 Andriod၊ Type C၊ ကြိုက်တာသုံး အားလုံးအဆင်ပြေပြီး အားအဝင်မြန်စေပါတယ် 🔌အားသွင်းကြိုးရော ခေါင်းပါ အားအဝင်လျှင်မြန်စေပြီး 66Wတောင် အပြည့်ထွက်တော့ ကြိုက်ပြီပေါ့ 🔌Over Temperature, Over Power, Over Voltage နဲ့ Over Current ဖြစ်ခြင်းမှလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ် 🔌 1minute ကို 5%တောင်တက်ပါတယ်☺️ မတက်ခဲရင် ပစည်းတန်ဖိုးအတိုင်း ပြန်လျှော်ပေးမည်။ စက်ရုံမှတိုက်ရိုက်တင်သွင်းသောကုန်ပစည်များဖြစ်သောကြောင့် ပစည်းမှန်/စျေးမှန်ဖြစ်ကြောင်း စိတ်ချယုံကြည်စွာ ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါသည် 👉တောင်ပံချင်းခတ် လက်ချင်းယှဥ်လို့ 👉ခြွင်းချက်မရှိ ပေါင်းစည်းထုဆစ် 👉တည်ဆောက်နေကြတဲ့😊😊 👉Ko Wai Tun Mobileမှာယှဥ်ပြိုင်မူမျိုးစုံကို အန်တုကာ တည်ရှိနေသောနေရာလေးကတော့NoJ7 J8 J9 ပထမထပ် ယုဇနပလာဇာ မဂ်လာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်းမှာ တည်ရှိနေပါတယ်😊 Ko Wai Tun B2B Mobile Accessories Business 10 Aug · 1.1K views